PPST အဖွဲ့မှ KNU နုတ်ထွက်ခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထား - Yangon Media Group
”အချိန်အခါကာလအပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတော့ လိုသလိုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရတာပေါ့။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ ရွေးချယ်မှုရှိတာပေါ့နော်။ ဒီစုဖွဲ့မှုက ပြန်ပြုပြင် ဖို့ လိုပါတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတော့ ပြုပြင်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာတော့ နုတ်ထွက်ဖို့ စာတင်လိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ”ဟု KNU ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောတာ ဒိုမူးက ပြောသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲ ရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA)လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ(NCA-SEAO) ၏ စတုတ္ထကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးညီလာခံကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် မေ ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်း အဝေးစတုတ္ထနေ့ဖြစ်သည့် မေ ၁၇ ရက်တွင် KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောတာဒိုမူးက KNU ၏ နုတ်ထွက်စာကို တင်ပြခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ”KNU အနေဖြင့် မေ ၁၉ ရက်တွင် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကိုအခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူ လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် NCA လမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ PPST အစည်းအဝေးသို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး တက်ရောက်ခဲ့ကာ NCA အကောင်အထည်ဖော်မှု ပိုမို အားကောင်းစေခြင်းနှင့်အတူ ယုံကြည်မှုတည် ဆောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကြား စုဖွဲ့မှုအသစ်တစ်ခုကို အစည်းအဝေး၌ အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစုဖွဲ့မှုတွင် လက်မှတ်ထိုးထားပြီး သောအဖွဲ့များနှင့် လက်မှတ်မထိုးသေးသည့် အဖွဲ့များအားလုံး ပါဝင်နိုင်သောအခင်းအကျင်းဖြစ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေး(Peace Process Con-sultative Meeting (PPCM)ကို ဖွဲ့စည်းရန် အဆိုပြုခဲ့မှုများရှိသည်။
ပညာရေးစနစ် မှန်ကန်ပါက အခြားနိုင်ငံများကို အချိန်တိုအတွင်း ရင်ပေါင်တန်း အမီလိုက်နိုင်မည်ဟ?
ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကမ်း၌ အပန်းဖြေစခန်းများ ဖွင့်လာခြင်းကြောင့် အမျိုးသား ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် (ပြင်ဥ??
ဖျာပုံမြို့၌ မိုးစပါး ရိတ်သိမ်းရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ၊ ရန်ကုန်နှင့်မြိတ်မြို့မှ ဆန်ကုန်သည်မျာ?